Starbucks, Iwe Unogona Kuva Uchiita Zvemagariro Zvirinani | Martech Zone
Ini ndinodhonza pasocial media kadhi zvishoma pandinofanira. Ini pachangu, semuridzi webhizinesi, ini ndinowanzo gunun'una kana ndikaona mutengi achirovera pachena kambani online. Kunyanya kana iri mutemo uye kazhinji isiri iyo murombo mutengi webasa revamiriri mhosva. CSR's hazviwanzo gadzira iyo mirau, zvinowanzo kuve mumwe munhu ari kumusoro kumusoro uye zvishoma kubva mukusvikira inobata izvo zvinhu.
Mune ino kesi, zvakadaro, ini ndinofanira kugovera chiitiko ichi pachena nekuti chinonongedzera kumatambudziko ayo makambani mazhinji anotambura nawo kana zvasvika pasocial media. Zvakare, haisi chero kambani ... ihwo hwakasimba mhando ine purofiti margins kaviri pakati nepakati bhizinesi. Izvi zvinoreva kuti ivo vanokwanisa kukwanisa kuteerera, uye vanokwanisa kugadzirisa iyi nyaya kunatsiridza yavo yemagariro midhi yakamira kune avo vatengi base.
Muvhiki rino, ndakadzokera kuFlorida kuIndiana. Irwo rwendo rwandinotora roga roga uye ndinonakidzwa nerunyararo rwekutyaira, nzvimbo, uye nguva yekufunga nezve zvinhu. Ini ndiri munhu anofarira kofi (Starbucks inogona kuvhunduka kana ikaona bhajeti redu regore rekambani yedu diki pane yedu kadhi reStarbuck) uye kazhinji kuronga masitepisi angu maererano neapo pane Starbucks pane irikubuda.
MuMcDonough, GA, ndakabuda I-75 ndokutyaira mamaira mashoma kuenda kuStarbucks. Pandakapinda muchitoro, ndakapinda mukamuri revarume uye ndakavhunduka. Tsvina yanga ichifashukira uye pasi painge pakafukidzwa. Ini handisi kuzotsanangura kunhuhwirira, kungoti zvaive pachena kuti yakange yapfuura nguva. Hazvireve kuti ini handitarisiri imba yekugezera padyo nemugwagwa mukuru wakabatikana kuti uve isina gwapa… asi iyi yanga isiri garaji, yaive Starbucks yangu yandaida.
Ndakamira mumutsara uye ndakatarisa imwe barista ichibata dhiraivha iyo, uye imwe ichimhanya yakapenga kupenga ichitevedzera mutsara. Ndakaverenga vashanu vanowedzera vashandi vachimira chaipo vasina chavanoita. Mushure mekutambira chinwiwa changu, ndakaenda patafura uye zvaitaridza kuti yanga isina kupukutwa mumaawa. Paive nemachira emachira nemanapukeni achizadza pasi pakati pekumvura. Ndakagomera ndokuenda panze kwandakatora foto iyi ndokugovana paTwitter.
@Starbucks chitoro ichi chine tsvina. Mukati, kunze, dzimba dzekugezera, zvese. Uye boka revashandi rakamira rakatenderedza. pic.twitter.com/gFFxKEya46
Handina kuwana mhinduro, asi mumwe muteveri akapinda mukati ndokubvunza kuti iyo Starbucks yaive kupi… saka ndakamupindura uye ndikasanganisira Starbucks.
@harrisja @Starbucks Ini-75 muMcDonough, GA. Imba yekugezera yaive yekupfuura kutora pikicha.
Yangu yepakutanga Tweet yaive pa2: 11 PM. Starbucks akazopindura na4: 09 PM:
@douglaskarr Tine hanya - pls email ruzivo kune twittercustomerservice@starbucks.com w / chitoro info: https://t.co/osOKugph5J. Kukumbira ruregerero.
- Starbucks Rubatsiro (@starbuckshelp) December 27, 2015
Ugh. Handina kumbo pindura.
Zvichida nemwaka wezororo, Starbucks vezvenhau vanhu vaive vakabatikana zvakanyanya kuterera kune yangu tweet. Ingori tweet imwe chete, handiti? Zvakanaka, rudzi rwe. Kubva pavanhu vese vakashanyira chitoro chine tsvina zuva iri, ndini here ndoga ndakavazivisa nezve nyaya?
Vangani vasiri maBuckees vakapinda ndokubuda kunze neichi chitoro sevanoona kwavo kwekutanga? Vangani vevateveri vangu varasikirwa nekutenda kudiki muchiratidzo chavaida. Vangani vaviri ava ikozvino vanotsvaga imwe shopu yekofi mumugwagwa panzvimbo peStarbucks nekuti kuenderana kwezvitoro zvavo zvakanaka zvino kwavhiringidzwa? Ndinoziva kuti ini handisi kuzoenda kune icho chakati chitoro chero nguva munguva pfupi.
Hezvino izvo zvandingadai ndakada kuona muTweet kubva kuStarbucks:
Tine hanya, anonzi maneja wechitoro. DM ini kuitira kuti tigone kuzviitira iwe. Jasoni
Hazvingave zvakaoma kuwana chitoro, unogona kushandisa iyo Starbucks app kana yavo sitoro locator:
Zve Starbucks uye chero imwe kambani iri kuongorora vezvenhau, hezvino zvidzidzo zvinodzidziswa:
Time Response - Sezvo ini ndanga ndakagara muStarbucks, zvingave zvakanaka kuwana mhinduro. Maawa maviri gare gare akandiratidza kuti havana hanya.
Kupiwa simba - Wako wezvenhau munhu akabvunza chaizvo me kutumira email kune mumwe munhu? Sei usina kupihwa simba rekubata maneja wechitoro iwe?
Deredza - Hazviwanzo kuitika kumakambani kutsiva chikanganiso, asi vanogona kurerutsa nyaya nekuratidza kuonga. Kundipa kiredhiti pane yangu Starbucks kadhi zvaizove zvakanaka.
Personnalisez - Tese tinovenga mazita asina zita. Zvinenge zvave kubatika uye pachako kusaina nezita rako (ini ndangofungidzira zita).
Ndichiri fan Starbucks uye ndinovimba vanoteerera iyi mhinduro uye nekuvandudza maitiro avo ekutarisa munharaunda.
Tags: Social Media Marketingmagariro enhaumagariro enhaukuongorora kwevanhuStarbucksstarbucks yemagariroTwitter
Iyo Yakanyanya Mutengi Kuwana Matanho Pamhepo